Snapchat wuxuu hadda kuu ogolaanayaa inaad la sheekeysto sheekooyinka ku yaal Tinder - TELES RELAY
ACCUEIL » TECH & TELECOM »Snapchat wuxuu hadda u ogolaanayaa inuu ku sheekeysto sheekooyinka ku yaala Tinder
Snapchat ayaa dhawaan ku dhuftay warka, tani si loo balaariyo shabakadeeda, iskuna day inaad dib u hesho suuqa. Marka lagu daro Ciyaaraha Snap-ka, waxaa suurtogal ah in ay u diraan sheekooyinka barnaamijka la xiriirka Tinder.
Instagram ayaa ku guuleysatay, Snapchat waa la iloobay. Haddii aan xaaladdu noqon dhibaato, dabcan. Laakiin adeegga Evan Spiegel waa inuu sooceliyaa. Waxa uu sameynayay dhowr bilood. Tani waxay soo marisay dhamaystir buuxa oo ku saabsan codsigii codsiga Android, oo ah shaqo loo qabtay sanadka oo dhan. Waxyaabo badan oo cusub ayaa soo muuqday.
Snapchat wuxuu soo bandhigayaa sheekooyinka app
Snap Inc. ayaa dhowaan soo bandhigtay imaanshaha "sheekooyinka app". Mabda'a waa mid fudud. Waxay noqoneysaa suuragal in la soo bandhigo sheekooyinka Snapchat ee codsiyada saddexaad. Muuqaal noocan oo kale ah lama soo saari karo iyada oo aan la wadaagin saaxiibkaa. Mid ka mid ah ayaa ah adeegga caanka ah ee Tinder.
Sida lagu sheegay bayaanka rasmiga ah: "Tinder waxay u sahlaysaa in la cusbooneysiiyo ereyada ay isticmaalaan isticmaalayaashooda iyaga oo kuu oggolaanaya inaad ku darto sheekooyin shakhsiyeed oo badan, taas oo noqon doonta mid macno leh. Isticmaalayaasha Tiner iyo Snapchat waxay awoodi doonaan inay u soo diraan Snap '' My Tinder Story 'ka soo Snapchat si ay u arkaan inay si toos ah ugu muuqaneyso profile Tinder."
sheekooyinka lagu soo dhoofiyo codsiyada kale, oo ay ku jiraan Tinder
Codsiyada kale ee lamaanaha ee waqtigan la joogo lama garanayo, ama ku dhawaad, Faransiiska, waxay ku saabsan tahay Guriga iyo Tacliinta. Isku dhafka ayaa noqon doona "dhamaystireen dhammaadka sanadka 2019". Ogow, Bitmoji - avatars in lagu abuuri karaa on Snapchat - waxay ka dhigi doonaan muuqaalkooda on Fitbit iyo Venmo.
Snapchat wuxuu go'aansadaa inuu dhoofiyo si uu kor ugu kiciyo joogitaankiisa shabakadda, istiraatiijiyadii horeba u xaqiijisay adeegyo badan. Caawimadan ayaa dib u soo nooleeyn doonta Snapchat? Mustaqbalka ayaa noo sheegi doona.
Ciyaaraha Snapchat: ciyaaraha fiidiyowga ee shabakadda bulshada
Iyadoo Status iyo Passport, Snapchat wuxuu rabaa hufan iyo barnaamijka Snap Map
Snapchat waxay rabtaa in ay si wanaagsan u xakameyso diiwaangelinta been abuurka ah ee ka yar sanadaha 13
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.begeek.fr/snapchat-permet-desormais-de-draguer-avec-ses-stories-sur-tinder-312134